Isku daa soodhada soodhada leh liinta waxaadna xusuusi doontaa inta ka dhiman noloshaada - CAALTH PLUS MAG
ACCUEIL » QODOBO »Isku daadi karinta soodhaha leh liinta waxaadna i xusuustaa nolosha inteeda kale - SANTE PLUS MAG
Isku qaso soodhada soodhada leh liinta, waxaadna xusuustaa nolosha inteeda kale - SANTE PLUS MAG
Welcome / Fayo & Caafimaad / foomka / cayaaraha / Talooyin maalmeed /
Isku daadi karinta soodhada leh liinta waxaadna xasuusineysaa inta kale ee noloshaada
Faa'iidooyinka soodhada iyo liinta waxay si fiican u dhisan yihiin. Sidaa darteed, qiyaas dhammaan faa'iidooyinka ay isku dhafan yihiin labadan waxyaalood ee caafimaadka ku keeni kara. Isku darkaani wuxuu noqday mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan ee guryaha ee adduunka ku yaal. Tani waxay kaa caawin kartaa inaad kor u qaaddo muuqaalka maqaarkaada, daawee qulub si aad u hagaajiso dheef-shiidka iyo in kale. Ku soo dhawee dhammaan waxyaalahan daaweynta this cajiib ah ee maqaalkan.
Xaqiiqdii, fikradda isku darka soodhada iyo casiirka citron wuxuu ku salaysan yahay mabaadi'da aasaasiga ah ee acidity iyo pH scale. this qiyaasta universal waxaa isticmaala bulshada cilmiga ah si ay u cabbiraan kiimikada xalka iyo waxay noqon kartaa inta u dhexeysa 0 iyo 14:
· Faahfaahinta pH ee ka hoosaysa 7 waxay muujineysaa in xalka uu yahay acidic
· PH oo u dhiganta 7 waxay muujineysaa in xal yahay dhexdhexaad
· PH ka weyn tahay 7 waxay muujineysaa in xal uu yahay alkaline ama aasaas
Or, baking soda qasan foomamka biyo xal xumadoodu sida liin, waxa ku jira qaarna iyo leedahay pH ah oo ku saabsan 3. Sidaas, isku daraan baking soda iyadoo liin ay soo saari doonto xal dhexdhexaad ah.
Recipe ee baking soda iyo cabitaanka liin
· 1 shaaha macmacaanka dubista
· ½ liinta
· 1 galaas weyn oo macdan ah
Isku qas dhamaan walxaha muraayada ah ee ku jira galaas biyo oo cab cabitaankan subax kasta calool madhan. Waxaad ku raaxeysan doontaa faa'iidooyinkeeda maalinta oo dhan.
Sababaha 6 ee cabitaanka daawadan
1) Heerka pH ee dheellitiran jirka
Marka dheecaannada jirkaagu ka kooban yahay aashit aad u badan, waxaa loo yaqaan acidosis. Dhibaatadani waxay dhacdaa markaad dhexda iyo sanbabadaadu ku fashilmaan inay ilaaliyaan dheellitirka pH. By isku qasin baking soda / liin, aad hoos u dhigi karaa heerarka acid ee jirkaaga oo sidaas daraaddeed kaaga yareyso oo ay ku jiraan laab saxarada iyo. Intaa waxaa dheer, in la ilaaliyo pH isku dheellitiraya waxa ay ka hortagtaa cudurrada iyo cudurada laga yaabo inay noqdaan kuwo la aasaasay. Intaa waxaa dheer, a waxbarasho ay qabatay Dr. Beverley Boot, oo ka tirsan Jaamacadda Virginia ee dalka Mareykanka, ayaa xaqiijiyay in la dubayo soda waa awood daaweynta aysiidh dheefshiidka chronic.
2) Si aad u daryeesho maqaarkaaga
Lemon wuxuu caan ku yahay sumcaddiisa antioxidant. Sidoo kale, xaddi badan oo antioksidanter oo qaarna ka hortagi kara murqo iyo waxyeellada daran oo lacag la'aan ah waxaa laga yaabaa in xag jirka ah. Waxay u fiicnaan kartaa wax badan oo ka mid ah maqaarkaaga waxayna kaa caawineysaa inaad hoos u dhigto calaamadaha da'da, hoos u dhigga muuqaalka lafdhabarkaaga iyo in aad maqaarkaaga u iftiimiso shimmered.
3) Si aad u ogaato jirkaada
Lemon ayaa sidoo kale loo yaqaanaa qarniyo badan oo saameyn ku leh duriinka, sidaas darteed waxa ay ka muuqaneysaa liiska cuntada avgiftning. Sidaa darteed, waxay kuu ogolaaneysaa inaad si deg deg ah u baabi'iso sunta xad-dhaafka ah, dufanka, electrolytes iyo biyaha. Sidoo kale, daraasad lagu daabacay joornaalka Cudurka BMCwaxay caddaynaysaa in liinku uu ka caawinayo inuu ka hortagourolithiasis, cudur keena abuurista walxaha adag iyo dhadhanka kaadiheysta kaadiheysta iyo kaadida.
4) Si loo hagaajiyo dheef-shiidkaaga
Isku darka soodhada / liinta ayaa ka caawiya in uu ka takhaluso heerarka aaladda ee jirka. Sidaa darteed, waxay kaa caawineysaa inaad si aad ah u yareeyso astaamaha dheef-shiid kiimikaad hooseeya: xajmiga saa'idka ah, lafdhabarta, casiraadyada ama xitaa mugdiga. Xaqiiqdii, a waxbarashooo lagu qabtay 2017 waxay baaris ku samaysay waxyeelooyinka xasaasiyadda ee cuntooyinka kala duwan. Cilmibaadhayaasha ayaa markaas ogaaday in la dubayo soda ay uga takhalusi lahaayeen ogol yahay si guul dardaro gastric acid. Sidoo kale, markaad ku qasto liin, lakinku wuxuu ka soo horjeedaa bicarbonate sodium si loo soo saaro nooca dabiiciga ah ee dabiiciga ah oo ka hortagaya isbeddelada pH sodium citrate.
5) Caafimaadka wadnaha oo wanaagsan
Le baking soda iyo citron yareynta heerarka baruurta iyo heerarka kolesteroolka xun. Sidaa daraadeed, isu-geynta labadan cuntadan waa mid muhiim u ah caafimaadka jidhkaaga wuxuuna kaa caawinayaa inaad hoos u dhigto khatarta wadno-qabka iyo istaroogga.
6) Si loo xoojiyo nidaamka difaaca jirka
Antioxidant, antibiotic, antiseptic, antiviral iyo bakteeriyada, liin (gaar ahaan saliidda) waxay ka caawisaa ka hortagga jirooyinka iyo bakteeriyada si ay u koraan jidhkaaga oo aad u xoojiso nidaamka difaaca jirka, marka lagu daro in lagu daro fitamiin C. Intaas waxaa dheer, baking soodhada waxay u ogolaataa sida horay loogu soo sheegey si loo kordhiyo alkalka dabiiciga ah ee jirkaaga, taas oo ka hortageysa xaaladaha asiidhka ah ee kor u qaadaya horumarinta cudurrada.
Talooyin: Waxyaabaha 5 ee haweeney caqli-gal ah ma aha inay kaydiso